Mahad Salaad " Hadaad 197 Xildhibaan heysataan miiska soo saarta codna aan ku kala baxno hadii kale saaxiiboyaalow masaajidka ciyaarta ka daaya!" - Caasimada Online
Home Warar Mahad Salaad ” Hadaad 197 Xildhibaan heysataan miiska soo saarta codna aan...
Muqdhso (Caasimdda Online) – Xildhibaan Mahad Salaad ayaa si kaftan leh uga hadlay shirarka ay magaalada Muqdisho ka wadaan xildhibaannada wada mooshinka guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari).
“Kulahaa “197 Xildhibaan” ayaa maanta iskugu yimid kulankii qadada ahaa ee ay soo agaasimeen Wasiirada Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre!. Waxaan ugu bishaareynaynaa saaxiibadeen in Gudoomiye Jawaari aqbalay in cod loo qaado. Tirada ay u baahanyihiina ay tahay 184 cod oo kaliya..” ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad oo qoraal kaftan ah ku weeray
Xildhibaanka ayaa talo kale u jeediyay xildhibaannada ka soo horjeeda Jawaari isagoo yiri: “Saaxiibo yaalow intaad iska dhaaftaan buula-xuuftada qadooyinka, shirarka jaraa’id iyo nambarada beenta ah ee la isku dhufsanayo mooshinkiina miiska soo saarta, noona ogolaada inaan cod ku kala baxno. Maadaama tiradii aad u baahnaydeen mid ka badan aad haysataan sida aad isku sheegteen… HADII KALE SAAXIIBO YAALOW MASAAJIDKA CIYAARTA KA DAAYA!